स्मरणशक्ति तेज बनाउन यस्तो तरिका अपनाउनुस्
HomeTipsस्मरणशक्ति तेज बनाउन यस्तो तरिका अपनाउनुस्
Chakrapani Bhandari April 13, 2018
कहिलेकाहीँ आफ्नै सवारीसाधनको नम्बर पनि याद हुँदैन । त्यस्तै, साथीभाइका मोबाइल नम्बर पनि फोनमा सेभ नगरी याद आउँदै आउँदैन । अझ लामो नम्बरको क्रम देख्दा त याद गर्न असम्भवझैँ लाग्छ । यसरी अंक सम्झन गाह्रो हुने समस्या धेरैलाई हुन्छ । तर, केही सजिलो उपाय अपनाएर धेरै नम्बर पनि लामो समयसम्म सम्झन सकिन्छ । नम्बर सम्झने तरिका सिक्नुअघि सानो प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी अंकलाई जति सक्दो छिटो क्रमबद्ध रूपमा याद गर्ने प्रयास गर्नुस् ।
गर्नु भयो ? कतिवटाजति याद भयो ? याद गर्न पक्कै गाह्रो भयो ? के याद भएका नम्बरहरू क्रमबद्ध रूपमा छन् ? आउनुहोस् सिकौँ, यसलाई याद गर्ने सजिलो तरिका :
अंक शब्दजस्तो हुँदैन । किनकि शब्दको चित्र बनाउन सजिलो हुन्छ, तर अंक वा नम्बरको चित्र बनाउन कठिन हुन्छ । अब तपाईंहरू जे सिक्दै हुनुहुन्छ, यो सबैभन्दा सजिलो विधि हो । त्यसो त विभिन्न अंक तथा मोबाइल नम्बरहरू स्मरण गर्ने अरू आधुनिक तरिकाहरू हुन्छन् । तर, आज सुरुवाती विधितिर जाऊँ ।
पहिला भनेजस्तै तपाईंको दिमागले शब्द, नम्बर बुझ्दैन, चित्र बुझ्छ । त्यही भएर त हामीलाई मान्छेको अनुहार याद आउँछ, तर नाम बिर्सिन्छौँ । किनकि, अनुहार भनेको चित्र हो, दिमागले बुझ्छ । तर, नाम भनेको शब्द भयो, दिमागले बुझ्दैन । त्यही भएर याद नै आउँदैन । तसर्थ, हाम्रो दिमागको बेसिक फम्र्याट भनेको चित्र हो, शब्द वा नम्बर होइन । त्यसैले अब हामीमाथि उल्लेख गरिएको नम्बरहरूलाई चित्रमा परिणत गर्नेछौँ, त्यसपछि हामीलाई जस्ताको त्यस्तै त्यही क्रममा याद आउनेछ ।
अब हामी यी अंकहरूलाई चित्रमा ढाल्दै शरीरको अंगहरूमा क्रमैसँग भिज्योलाइजेसन गर्दै जान्छौँ । स्मरण रहोस्, कुनै पनि कुरा बुझ्न वा याद गर्न हामीले त्यो नबुझेको कुरालाई बुझेको कुरासँग जोड्नुपर्छ । अथवा, भनौँ नचिनेका कुरालाई चिनेका कुरासँग मिलाउँदा सहजै चिनिन्छ । शरीरका अंगहरू तपाईं चिन्नुहुन्छ, कुन अंग कहाँ छ ? तपाईं आँखा बन्द गरेर भन्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले यी हरेक अंकलाई अब शरीरका अंगहरूसँग कहानी बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । याद राख्नुस्, कहानी बनाउँदा जति रोचक र हाँसउठ्दो हुन्छ त्यति नै सम्झन सजिलो हुन्छ । सामान्य कहानी बनाउँदा दिमागले छिटै भुल्न सक्छ । अनि अर्को कुरा सबै नम्बरलाई एकैपल्टमा याद गर्ने प्रयास नगर्नुस् । यी नम्बरलाई विभाजन गरेर टुक्रा–टुक्रा पार्नुपर्छ । यसो गर्दा दिमागलाई बोझ हुँदैन र सजिलै स्मरण रहन्छ । यो प्रक्रियालाई वैज्ञानिक भाषामा चुन्किङ भनिन्छ ।
अंक सम्झन पहिला टाउको सम्झौँ । तपाईं यो कल्पना गर्नुस् कि तपाईंको टाउकोमा एउटा कार गुडिरहेको छ । तपाई त्यो कारको सिसामा डटपेनले कोर्दै हुनुहुन्छ । स्मरण रहोस्, सोच्ने होइन, कल्पना गर्ने । चित्र बनाउँदा मात्रै याद रहन्छ, नत्र अरूजस्तै भुलिन्छ । अब ती अंकहरूको क्रमको सुरुको नम्बर हेर्नुस् त, चार छ । चारको कुनै निश्चित चित्र हुँदैन । यसलाई चित्र बनाउन हामीले अहिलेका लागि कार भनेर कल्पना गर्छौं । किनकि, चार र कार रेमिङ हुन्छ, जसले गर्दा याद रहन्छ । त्यसपछि पोइन्ट वा डट छ । त्यसलाई हामी डटपेन भनेर कल्पना गर्छौं ।
अब घाँटीतिर जाऔँ । घाँटीमा कंकालको दाँतले (३२) टोक्छ र एक्कासि (८१) टोक्छ, तपाईंले थाहै नपाई । कल्पना गर्नुस्, यसलाई जति सक्दो रोचक बनाउनुहोस् । यो कल्पनामा तपाईंको सबै इन्द्रियको प्रयोग गर्नुहोस् । दाँतबाट ३२ नम्बर याद आउँछ र एक्कासि टोकेको कल्पना गरेको कारणले ८१ नम्बर याद आउँछ । अब हाततिर जाऊँ । तपाईंको हात एउटा बाहुन (५२) ले समातेर रस्सीले (असी, ८०) बाँधिदिन्छ । जुन नम्बरको सजिलै कुनै चित्र आउँदैन । त्यसलाई ट्रिक प्रयोग गरेर अरू कुनै वस्तुसँग गाँस्नुपर्ने हुन्छ, रस्सीबाट अस्सी याद गरेजस्तो । अब जाऊँ छातीतिर । यहाँ तपाईंले १०० र १३ नम्बरको कहानी बनाउनु छ । यसो गर्नुहोस्, १०० का लागि एउटा १०० को रिचार्ज कार्ड कल्पना गर्नुहोस्, अनि १३ का लागि तीर । तपाईं आफ्नो छातीमा १०० को रिचार्ज कार्ड स्क्र्याच गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । नभएपछि तपाईं त्यो कार्डलाई तीरले स्क्र्याच गर्नुहुन्छ ।
अब ८४ र ३० लाई तपाईंको पेटमा भिज्योलाइजेसन गर्नुहोस् । एउटा चौरासी गरेको वा चौरासी उमेर भएको बूढो मान्छे तपाईंको पेटमा छ, बच्चा होइन, बूढो मान्छे छ । अनि त्यो बूढो मान्छे तपाईंको पेटभित्रै तास (तीस, ३०) खेल्दै छ । हाँस उठ्यो ? त्यसो भए याद भयो । तपाईंलाई फिल्मका हाँसउठ्दा सिनहरू ज्यादा याद हुन्छन् नि है । त्यही सिद्धान्त लागू हुन्छ यहाँ पनि । अब ती अंकलाई हेर्दै फेरि एकपल्ट त्यो कहानीलाई स्मरण गर्नुहोस् । भयो ? ल अब भन्नुहोस् त टाउकोमा के छ ? कार छ, जसमा तपाईं डटपेनले कोर्दै हुनुहुन्छ हैन त ? कारबाट चार याद आउँछ, अनि डटपेनबाट पोइन्ट वा डट (.) । त्यसैगरी घाँटी, हात, छाती र पेटमा के–के छ भन्दै जानुहोस् । जस्ताको तस्तै याद आउँछ ।